कोरोना संक्र मि तसँग अस्पतालमै यौ न सम्पर्क ! भिडियो भाइरल भएपछि प्रहरीले समात्यो – Sanjal Nepal
Homeसमाचारकोरोना संक्र मि तसँग अस्पतालमै यौ न सम्पर्क ! भिडियो भाइरल भएपछि प्रहरीले समात्यो
January 8, 2021 admin समाचार 4129
इन्डोनेशियाको जकार्तामा एक अस्पतालमै गैर जिम्मेवार गतिविधि भएको खबर सार्वजनिक भएको छ । यहाँकी एक समलैङ्गिक नर्सले आफ्नो निजी सुरक्षा उपकरण उतार्दै कोराना संक्रमितसँग शौचालयमा यौन सम्पर्क गरेको पाइएको छ ।
ट्वीटरमा मानिसहरुले यस यौन सम्बन्धबारे भिडियो साझा गरेपछि मात्रै यो घटना बाहिरिएको हो । यो भिडियो भाइरल बनेको छ । यूकेको सनका अनुसार यो घटना जकार्तामा एक कोरोना संक्रमितका लागि बनेको विस्मा एलट इमरजेन्सी अस्पतालमा यो घटना भएको हो ।
छिट्टै सामाजिक सञ्जालमा यो पोस्ट भाइरल बनेको थियो ।
सोधपुछका क्रममा शौचालयभित्र यौन सम्बन्ध बनाएको स्वीकार गरेका छन् । कोरोना भाइरस नेगेटिभ आएपछि नर्सलाई अगाडिको कारबाहीका लागि सेन्ट्रल जकार्ता प्रहरीलाई सुम्पिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् … ६ वर्षको उमेरमा सिक्सप्याक बनाएर प्रख्यात भए यी बच्चा (भिडियो)
November 13, 2020 admin समाचार 6036
चितवनको रवि रञ्जना घटना सामाजिक सञ्जाल’मा निकै चर्चित भएको घटना हो । विवाह गरेपछि पढ्नका लागि अष्ट्रेलि’या गएकी रञ्जनाले धो’का दिएको ‘भन्दै उनका श्रीमान रवि रु”वालीले देह त्याग गरेको बता’इएको थियो । दिदीको विवाहका लागि
December 16, 2020 admin समाचार 5948
November 8, 2020 admin समाचार 3643